Nhọrọ Nhọrọ - AOOD Technology Limited
Gịnị bụ mgbanaka mgbanaka?
Mgbanaka mgbanaka bụ ngwaọrụ elektrọnikọnụ nke jikọtara ya na brushes nke na -enye ohere ịnyefe ike na akara eletrik site na ọdụ ụgbọ ala ka ọ na -agbagharị. A na -akpọkwa njikọta eletriki rotary, onye nchịkọta ma ọ bụ swivel eletriki, enwere ike iji mgbanaka mmịfe na sistemụ elektrọn ọ bụla nke chọrọ enweghị mgbochi, na -agagharị ma ọ bụ na -aga n'ihu mgbe ị na -ebufe ike, analog, dijitalụ, ma ọ bụ akara RF na/ma ọ bụ data. Ọ nwere ike melite arụmọrụ igwe, mee ka ọrụ sistemụ dị mfe ma kpochapụ wires na-emebi emebi na-esite na nkwonkwo a na-ebugharị ebugharị.
Ọ bụ ezie na ebumnobi bụ isi nke mgbanaka mgbanaka ahụ bụ ịnyefe akara na ọkụ eletrik, akụkụ anụ ahụ, gburugburu ebe ọrụ, ọsọ ọsọ na nsogbu akụ na ụba na -emetụtakarị ụdị nkwakọ ngwaahịa a ga -arụrịrịrịrị.
Ihe onye ahịa chọrọ yana ebumnuche ọnụ ahịa ya bụ ihe dị mkpa n'ịkwalite mkpebi ndị na -ebute mmepe nke imebe mgbanaka mgbanaka na -aga nke ọma. Isi ihe anọ bụ:
Specifications nkọwapụta eletriki
Packaging nchịkọta nkwakọ ngwaahịa
Environment gburugburu ọrụ
■ ọnụ ahịa
A na -eji mgbanaka mgbanaka ebunye ike, analog, akara RF na data site na ngalaba na -atụgharị. Ọnụ ọgụgụ sekit, ụdị akara, yana ihe mgbochi mkpọtụ eletriki nke sistemụ na -arụ ọrụ dị mkpa na mkpebi nke ihe mgbochi anụ ahụ amachibidoro imewe mgbanaka mgbanaka. Dị ka ihe atụ, okirikiri ike dị elu, chọrọ ụzọ mgbazinye buru ibu yana ohere dị ukwuu n'etiti ụzọ iji bulie ike dielectric. Ọdịdị analog na data, ebe ha dị warara karịa okirikiri ike, chọkwara nlekọta na nhazi ha iji belata mmetụta nke mkparịta ụka ma ọ bụ nnyonye anya n'etiti ụzọ mgbaàmà. Maka obere ọsọ, ngwa dị ugbu a enwere ike were sistemụ kọntaktị ọla edo na-ọla edo/mgbanaka. Ngwakọta a na -emepụta nhazi nkwakọ ngwaahịa pere mpe dịka egosiri na AOOD kọmpat capsule slip rings. Maka oke ọsọ na mkpa ugbu a, agụnyere mgbakwunye brushes ọlaọcha na mgbaaka ọla ọcha. Mgbakọ ndị a na -achọkarị nha ngwugwu ka ukwuu, a na -egosikwa ya site na mgbanaka mị amị amị. N'iji ụzọ abụọ ọtụtụ okirikiri mgbanaka mgbanaka na -egosipụta mgbanwe na nguzogide kọntaktị siri ike nke ihe dịka 10 milliohms.
Ntụle nkwakọ ngwaahịa na ịchepụta mgbanaka mgbanaka anaghị adịkarị mfe dịka ihe ọkụ eletrik chọrọ. Ọtụtụ atụmatụ mgbanaka mgbanaka chọrọ eriri na oghere nrụnye ma ọ bụ mgbasa ozi iji gafee mgbanaka mkpọpụ ahụ. Ihe ndị a chọrọ na -ekpebikarị akụkụ nke dayameta nke ụlọ. AOOD na -enye mgbakọ mgbakọ mgbanaka mkpọda dị iche iche. Atụmatụ ndị ọzọ na-achọ ka mgbanaka mgbanaka dị obere nke ukwuu site na ntụpọ dayameta, ma ọ bụ site na ntụpọ dị elu. N'ọnọdụ ndị ọzọ, oghere dị maka mgbanaka mgbanaka ahụ nwere oke, na -achọ ka ewepụta ihe mgbanaka mgbanaka ahụ dị ka iche, ma ọ bụ ka ejikọ mgbanaka mgbanaka ahụ na moto, ihe mmetụta ọnọdụ, njikọta fiber optic rotary ma ọ bụ nkwonkwo rotary RF na ngwugwu agbakwunyere. . Dabere na teknụzụ mgbanaka gbachapụrụ agbachapụ, AOOD na -eme ka ihe ndị a dị mgbagwoju anya nwee ike zute n'otu sistemụ mgbanaka mgbanaka zuru oke.
Gburugburu nke achọrọ mgbanaka mmịfe ka ọ rụọ ọrụ n'okpuru ya na -emetụta imepụta mgbanaka mgbanaka ahụ n'ọtụtụ ụzọ. Ọsọ ntụgharị, okpomoku, nrụgide, iru mmiri, ujo & ịma jijiji na ikpughe ihe ndị na -emebi emebi na -emetụta nhọrọ nhọrọ, nhọrọ ihe dị na mpụga, mgbago flange na ọbụna nhọrọ nhọrọ. Dị ka omume a na -eme, AOOD na -eji ụlọ aluminom dị fechaa maka mgbanaka wepụrụ ya. Ụlọ igwe anaghị agba nchara dị arọ, mana ọ dị mkpa maka mmiri, n'okpuru mmiri, corrosive na gburugburu ebe obibi siri ike.
Otu esi akọwapụta mgbanaka mgbanaka
Mgbakwụnye mgbanaka bụ akụkụ nke usoro ka ukwuu yana mkpa ịgafe ike eletrik na sekit mgbaama site na elu na -atụgharị. Usoro mgbanaka mgbanaka ahụ bụ akụkụ nke na -arụ ọrụ na gburugburu dịka ụgbọ elu ma ọ bụ sistemụ antenna radar. Yabụ, imepụta mgbanaka mgbanaka nke ga -eme nke ọma na ntinye ya, a ga -enwerịrị afọ ojuju atọ:
1. Akụkụ nke anụ ahụ, gụnyere nhazi mgbakwunye na atụmatụ ntụgharị
2. Nkọwa nke sekit chọrọ, gụnyere oke kacha ugbu a na voltaji
3. Ebe ọrụ, gụnyere okpomọkụ, iru mmiri, ihe chọrọ nnu nnu, ujo, ịma jijiji
Ihe achọrọ maka mgbanaka mgbanaka nkọwa zuru ezu gụnyere:
■ Nguzogide kachasị n'etiti rotor na stator
■ Mwepu n'etiti sekit
■ Mwepu sitere na isi mmalite EMI na mpụga ụlọ mgbanaka mgbanaka
■ Malite na ịgba ọsọ
■ Ibu ibu
■ Nkọwa data sekit
Njirimara ndị ọzọ a na -ahụkarị nke enwere ike itinye na mgbakọ mgbanaka mgbanaka gụnyere:
■ Ndị otu rotary nwere mmiri mmiri
■ Ndị otu Rotary Coax
■ Njikọ eriri rotary fiber
AOOD ga -enyere gị aka ịkọwapụta mkpa mgbanaka mgbanaka gị wee họrọ ezigbo ihe nlereanya maka ihe nrụpụta gị.